नेपालमा कोरोना खोप लगाएपछि साइड इफेक्ट देखिए के गर्ने ? विज्ञसँग छलफलमा जुट्यो सरकार - Ganatantra Online
नेपालमा कोरोना खोप लगाएपछि साइड इफेक्ट देखिए के गर्ने ? विज्ञसँग छलफलमा जुट्यो सरकार
२९ मङ्सिर २०७७, सोमवार
काठमाडौं, २९ मंसिर । सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएपछि केही व्यक्तिमा साइड इफेक्ट देखिएमा त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कोभिड भ्याक्सिन नयाँ भएकाले त्यसको प्रयोगबाट हुने असरको जिम्मेवार को हुने ? साइड इफेक्ट देखिएका व्यक्तिमा गम्भीर समस्या आएमा वा त्यसले निम्त्याउन सक्ने परिस्थतिका विषयमा स्पष्ट गरेर मात्र भ्याक्सिन ल्याउन विज्ञले सुझाव दिएका छन् ।
साइड इफेक्ट देखिएका व्यक्तिको थप उपचार वा उसको परिवारका विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल चलेको छ । खोपको आकस्मिक प्रयोग गरिरहेका केही देशका केही व्यक्तिमा सामान्य साइड इफेक्ट देखिएको छ ।
यद्यपि, नेपालमा अझै कुन खोप ल्याउने भन्ने तय भने भइसकेको छैन । सरकारले भ्याक्सिन लगाउने व्यक्तिहरुको जोखिमका आधार पहिचान गरिसकेको छ ।
कोभिड खोपका लागि तयारी गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा सचिवालय बनाई विभिन्न समिति समेत गठन गरिएको छ । सचिवालयका एक सदस्यले स्वास्थ्यखबरलाई भने, ‘सचिवालयको बैठकमा पनि यो विषय गम्भीर रुपमा उठेको छ । नयाँ खोप भएकाले खोप उत्पादन गर्ने देश र कम्पनीहरुले खोप लगाउँदा कुनै पनि रिक्यासन भएमा त्यसको जिम्मेवारी खरिद गर्ने देशले लिए मात्र खोप दिने कुरा भइरहेकोले यो विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
खोपको प्रयोगपछि केही घटना भएमा के गर्ने, कसले जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा पछिल्लो समय सचिवालयमा छलफल भइरहेको तर टुंगोमा नपुगेको उनको भनाइ छ । नेपालमा आवश्यक कोभिड भ्याक्सिन, भ्याक्सिन पाउने व्यक्तिको उमेरका आधारमा जनसंख्या, कोल्डचेनको क्षमता विस्तार, आवश्यक निर्देशका लगायतको तयारी गरिसकेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित कोभिड भ्याक्सिन प्राविधिक सल्लाहकार समितिका संयोजक डा श्यामराज उप्रेती पनि कोभिड भ्याक्सिन नयाँ भएकाले यसको सुरक्षाको लागि निकै नै प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले खोपको सुरक्षामा चुस्त अनुगमन गनुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसका लागि हामीसँग पहिले नै खोपपश्चात् निम्तिन सक्ने जोखिमको लागि अनुसन्धान गर्ने स्वायत्त कमिटी छ ।
अर्को, भ्याक्सिन लगाएर कसैलाई केही असर भयो भने त्यसको रिपोर्ट गर्ने सिस्टम छ । त्यसपछि अनुसन्धान हुन्छ । त्यो घटना भ्याक्सिनसँग सम्बन्धित हो कि होइन भनेर फिडब्याक दिने गरिन्छ ।’